China nkedo igwe akwa akwa akwa efere na suppliers | Bocheng Co-ihe okike
Mmadụ Bịa na ileta anyị ịmatakwu banyere anyị factory.
OEM / ODM dị:
Akara gị na ngwaahịa ahụ.
Ahaziri ngwaahịa dị ka gị Eserese.
Ọ bụla gị echiche na ngwaahịa anyị nwere ike inyere gị aka chepụta ma nye ịbịaru.
Akụkụ nke nkedo akwa akwa akwa anyị
A-● Ihe dị elu-ike, njupụta dị elu na grained graised cast iron dị na ọkwa nke GG-20, GG-25 ma ọ bụ GG-30 ka a ga-ahọrọ iji rụpụta t-slotted cast iron floor plate. Enwere ike iji ihe ndị ọzọ dịka iron castular ma ọ bụ iron cast on request;
The ribbed & cored Ọdịdị awade adịchaghị rigidity na ike maka t-slotted igba ígwè n'ala efere. Enwere ike ịnye ụlọ dị ike dịka arịrịọ gị.
Ike maka GG-25 isi awọ kpụọ ígwè mere t-slotted ala efere dị na nso nke HB170-240. Igwe ihu dị larịị nke dị n'elu ọkwa nke ihe eji eme ihe bụ nke ọkwa ọkwa dị ka ọkwa M, II ma ọ bụ III dị ka DIN 876 Standarad. The elu flatness ziri ezi nwere ike nweta site n'aka scrapping n'elu gị arịrịọ. Ihe na-eme ka ihu ala na mbadamba ihe eji eme ihe na-abụkarị Ra 3.2 obtainedm nke enwetara site na ịnabata usoro ntụgharị ngwa ngwa CNC. A pụkwara imepụta ihe ike dị ka Ra 1.6 μm site na nchịkọta usoro na arịrịọ gị;
Rance Ohere nke oghere T na obosara nke ígwè t-slotted bụ H12 ma bụrụkwa H7 ma ọ bụ H8 na-arịọ. A na-enyekarị T-oghere ndị kwekọrọ na usoro ogologo, mana a ga-enyekwa oghere T-tilit na nke longitudinal na arịrịọ. I nwekwara ike ịrịọ maka oghere abụọ na obe t-oghere na t-slotted cast iron floor plate;
Construction Ihe eji arụ ọrụ na nke agbụ, okpukpu abụọ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na okpomọkụ dị na nso 600-700 Celsius C (ihe nkedo nke 1st ka emechara mgbe a tụchara ya, ntinye nke abụọ emechara mgbe ọ na-arụ ọrụ na efere) na ịka nká. ọgwụgwọ na-etinyere na ndị a t-slotted nkedo ígwè efere iji belata nrụgide na nke kacha nta, hụ na elu kwụsie ike ma nọgide na-enwe izi ezi ya na-agbagọ agbagọ;
● Ijikọ grooves n'akụkụ niile nke t-slotted nkedo ígwè efere nwere ike nyere na-arịọ ka jikọtara ọnụ iberibe n'ime a nnukwu efere ebe;
● Ejiri efere na anchoring paadị. Omume ọma jijiji mmiri mounts nwere ike alsot nyere na arịrịọ;
Nke gara aga: konkiri n’elu ala
Osote: D28 3D tebụl ịgbado ọkụ
Igba Iron Ft efere
Igba Iron Surface Nnyocha efere
Igba Iron Mpekere efere
Igba Iron Mpekere
Igba Iron T-Slotted Test Beds efere
Igba Iron Test efere
T oghere Nkedo Iron Ft efere
T-Slotted Nkedo Iron Efere